Toeram-pivarotana tsara indrindra any Paris
Enga anie 13, 2022 Shubham Sharma Paris, zavatra atao
Raha mitsidika an'i Frantsa ianao dia tsy maintsy mitsidika ireo toeram-pivarotana tsara indrindra. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy misy na inona na inona tsy hitanao any. Miomàna hankafy ny fiantsenana tsara indrindra any Frantsa manerana ny sasany amin'ireo tanàna mavitrika indrindra. SASANY
Banky ambony indrindra any Però
Enga anie 7, 2022 Shubham Sharma Banks, Però
BCP, BBVA Peru, Scotiabank Peru ary Banco Internacional no banky lehibe efatra. Izy io dia ahitana banky serivisy 15 manerantany ary koa mpamatsy vola madinika (Cajas Munez, Cajas Rurales ary Edpymes). Izy ireo koa dia manome serivisy toy ny manam-pahaizana manokana momba ny vola, masoivoho fanofana
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty banky any India?
Enga anie 7, 2022 Shubham Sharma Banks, India
Mba hanokafana kaonty amin'ny banky any India, ny mpangataka dia tsy maintsy manana lisitr'ireo taratasy takian'ny banky rehetra an'ny fanjakana sy ara-barotra Indiana mba hanatanterahana ny fenitry ny Know Your Customer (KYC). Any India, izay ezahin'ny governemanta
Enga anie 6, 2022 Shubham Sharma Banks, Nepal
Ny banky dia manan-danja tokoa amin'ny olona rehetra, na amin'ny orinasa iray aza, amin'ity lafiny ity. Ho fiarovana, ny banky no safidy hamindra amin'ny fomba azo antoka ny fandoavam-bola sy hanao fifanakalozana na hitahiry vola. Serivisy hafa samihafa toy ny fampindramam-bola azo ampiasaina
Banky tsara indrindra any Singapaoro
Enga anie 6, 2022 Shubham Sharma Banks, Singapore
Singapore dia malaza ho foibe ara-bola iraisam-pirenena ary foibe Aziatika manan-danja amin'ny fitantanana ny harena sy ny fiantohana. Mihoatra ny 150 ny fikambanana mandray petra-bola, anisan'izany ny banky feno, banky feno mahafeno fepetra, banky ambongadiny sy mpivarotra, ary orinasa mpamatsy vola, mandrafitra ny banky any Singapore.